विवादित भूमि साटासाट गर्ने चीनको भूटानलाई प्रस्ताव, सहमति भए भारतलाई खतरनाक ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विवादित भूमि साटासाट गर्ने चीनको भूटानलाई प्रस्ताव, सहमति भए भारतलाई खतरनाक !
काठमाडौं, १० साउन । पछिल्लो समय भारतको छिमेकी कुनैपनि मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो छैन । सम्बध बिग्रिनुको मुख्य कारण भूमि विवाद नै हो । सिमाना जोडिएका प्रायजसो मुलुकहरु भारतको व्यवहारसँग त्यति खुस छैनन् । विशेषगरी पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भुटानसँग भारतको सीमाविवाद हुँदै आएको छ । तर पछिल्लो विकसति घटनाक्रम हेर्दा भारतको नेपाल र चीनसँगको सीमा विवाद अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चाको बिषय बनेको छ । यो भन्दै गर्दा चीनको भारतभन्दा बाहेक अन्य मुलुकसँग सीमा विवाद भने नभएको होइन । उसको भूटानसँग धेरै समय पहिलाबाट दुई क्षेत्र बिवादित छन् ।
नेपाल र भुटान जस्ता कम बिकसित मुलुकहरु आफ्नो सीमा बचाउनसम्म मात्र क्षमता राख्छन् । तर चीन र भारत बिकसित र शक्ति सम्पन्न मुलुक भएकाले अन्य मुलुकलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्दै एकआर्कामा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने संघर्षमा छन् । यसैबीचमा चीनले सीमा विवाद प्याकेजमै हल गर्न हल गर्न भूटानलाई भूमि साटफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसले भारतलाई त्रसित बनेको छ ।
चीनले भूटानसँगको उत्तरी क्षेत्राको विवादित भूमि भुटानलाई दिने र त्यसको साटोमा भुटानले पश्चिमी क्षेत्रको विवादित भूमि डोकलाम चीनलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यो सहमति भए भारतलाई ठूलो सुरक्षा चुनौंती हुनेछ । सामरिक महत्वको डोकलाम क्षेत्रमा चीनको आधिपत्य हुँदा भारतलाई सुरक्षाको दृष्टिले खतरनाक अवस्था सृजना हुने जानकारहरुको भनाइ छ । चीनको यो दोस्रो पटकको प्रस्ताव हो ।
भूटान चीनबीच सीमा बिवादमा पटकपटक छलफल भएपनि यो प्रस्ताव भने दोस्रो पटकको हो । यसअघि १९९६ मा चीनले भुटानलाई गरेको प्रस्ताब पुन दोहोर्याएको हो । त्यो बेला प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । दोस्रो पटक मनाएर सम्भौता गर्न चीनको विदेश मन्त्रालयले अहिले सागतेंगसँग जोडिएको पूर्वी सीमामा जोडिएको भूमि आफ्नो भएको दावी गरेको छ ।
सोही भूमि भुटानलाई दिएर अर्को पश्चिमी क्षेत्रको विवादित भूमि डोकलाम आफूलाई दिने सम्झैतामा मान्न चीनको प्रस्ताव हो । उता भारतले भने भुटानसँगको विवादित भूमि आफ्नो दावी गर्दै डोकलमलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने चीनको योजना रहेको भन्दै विश्लेषण गरिहेका छन् । यसअघिको प्रस्ताबमा तत्कालीन सरकार प्रमुखले भूटानका सांसदहरुलाई प्रस्तावबारे अवगत पनि गराएका थिए ।
कति छ विवादित भूभाग ?
पहिलाे भुटानको उत्तरी क्षेत्रको ४९५ वर्ग किलोमिटर भू-भाग चीन र भूटानबीचको विवादित भूमि हो । दोस्रो भूमि विवाद भुटानको पश्चिमी क्षेत्रको हो । जुन २६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र छ । यी दुवै क्षेत्र भूटान र चीन दुवैको सीमा क्षेत्रका भूभाग हुन् । चीनले उत्तरी क्षेत्रको ४९५ वर्ग किलोमिटर विवादित भूभाग दिएर त्यो भन्दा आधा विवादित क्षेत्र लिन चाहोको हो । दुई मुलुकबीच १९८४ देखि सीमा विवादका विषयमा वार्ता हुँदै आएका छन् । चीनको पहिलो पटकको प्रतावमा थोरै विवादित भूमि दिँदा धेरै भूमि आउने हुनाले भूटान मान्न तयार थियो । तर त्यो समय भारत र भूटानको सम्बन्ध राम्रो भएकाले भारतको हित हेर्दै भूटान सम्झौताबाट टाढा भागेको थियो । अहिले भारतको सबै छिमेकीहरुसँग सम्बन्धमा चिसोपना छाएको बेला चीन भूटान सम्र्झाता हुन सक्ने जनकारहरु बताउछन् । यदी यो सम्झौता भए डोकलाम चीनको कब्जामा आएसँगै चिनियाँ सेनाको पहुँच सिलिगुढी करिडोरसम्म आउने आंकलन गरिएको छ । जुन भारतको चीनबिरुद्धको रणनीतिमाथि अत्यान्तै ठूलो असर हुनजान्छ ।
खुशीको खबर ! को’रोना बि’रुद्धको आयुर्बेदिक औ’ष’धी बितरण सुरु, उदयपुरकाे भुल्केबाट बाँड्न थालियो